बच्चा जन्माउने, चयन, आन्दोलन, फोटोहरू, अल्ट्रासाउन्ड
गर्भवतीको year 99 वर्षमा गर्भावस्थाको year 99 वर्षमा महिला अस्पताल नाम नं अस्पताल नाम आएको थियो। मास्कोको स्वास्थ्यको स्वास्थ्य विभाग विजयी हुन्छ पेटको तल तीव्र पीडाको साथ। गर्भावस्था पहिले नै चौथो थियो र धेरै सामान्य बढ्दै गयो जब सम्म जन्मिदैन, people9 हप्ता, सर्तको कुनै आश्चर्य छैन।
- बिरामीले मतली र पीडाको बारेमा स्थानीय र दाहिने बारे गुनासो गरे। खुट्टाको झूट स्थितिमा घुँडा टेक्न थालेको थियो, पेटमा अचम्मलाग्दो छ, र कहिले पाल्पी चम्किलो दुखाइ थियो। हामी उप-थेस्कोसिटिस शंका गर्छौं, सेक्शनका सिजरियन खण्डमार्फत सञ्चालन गर्ने र उक्त आधारमा हाम्रो अस्पताल भाषाका लागि एक महिलाले शल्यचिकित्सक भनेको छ, - रोडोडम रजाडमिननो-अपरेटिंग विभागको प्रमुखलाई तुच्छ रूपमा भनिन्छ ।
ओबस्टेट्सको चिन्ता एकदमै उचित थियो। कफेम्स परिशिष्टहरू परिशिष्टको एक तीव्र रूप हो - एक मजबूत EDEM र शुद्धताको संचय द्वारा विशेषता हो। यो रोग छिटो प्रगति हुन्छ। परिस्थितिको आवश्यकता सबै इन्द्रियमा परिचालन समाधान आवश्यक छ - यस्तो विनाशकारी रूप पनि फरक र परिशिष्टको ग्यारेन्टीको जोखिम पनि फरक छ।
- यो पक्कै पनि हो, जब अस्पताल विशेषज्ञहरूले प्रजा कार्यालयका सहकर्मीहरूको सहयोगमा आएका थिए। हामी वास्तवमै एक टोली हौं।
बच्चाबहिनीमा विभिन्न अवस्थाहरू छन्, "माइकहियाल्लीआरीविचारी कोशेन्को भन्छिन्," जब महिला पहिलो सिभेर्ज हुन्छन्, तर जब सेजेनमा सञ्चालित हुन्छ तब गुफा, त्यहाँ एक सुरक्षित प्रक्रिया वा रक्तस्राव थियो - यो सधैं प्रगति गर्न राम्रो हुन्छ।
हामी वास्तवमै अस्पतालमा कार्य गर्दछौं - यदि हाम्रो विभागमा नियुक्त गरिएको महिलाको सञ्चालन र यसका साना पेशाबकारी विभागबाट विशेषज्ञहरूसँग परामर्श लिनको लागि निश्चित हुनुहोस्।
चौथो दिनमा डिलिभरी र अपरेशनको चौथो दिनमा महिलालाई उनको काखमा एउटा आकर्षक चौथो छोरीसँग स्वागत छ।
डाक्टरहरू "अल्ट्रासाउन्ड स्टुडियो" हिसाबले गणना गरिएको छ कि prevanters 83% गर्भवती महिलाहरूले बच्चा जन्माउनु अघि अल्ट्रासाउन्डलाई पार गरे। यो केको लागि आवश्यक छ भन्ने बारे हामी हामीलाई अल्ट्रासाउन्ड डाक्टर, एक ओभरस्टेट्र्यान्डरिडका डाक्टर, एक ओभस्ट्साइट्रिक जिनिको रोगी डेनिस मिनिसोलोविच रोमानिक रोमानिक रोनिकी।
- गर्भावस्थाको सामान्य कोर्सको साथ, प्रत्येक त्रैमासिकको लागि औसत एकमा तीन वा चार अल्ट्रासाउन्ड बनाउन सिफारिस गरिन्छ, तर धेरैले पारित धेरै पटक, विशेष गरी प्रसवन।
लेट सर्तमा अल्ट्रासाउन्ड - निदानको एक धेरै गम्भीर चरण, किनभने यो तपाईं सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्यारामिटरहरू परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ: यसको विकास, वजन र स्थितिमा भ्रुणको विकास गर्भाशय।
थप, एक अल्ट्रासाउन्ड अध्ययनले तपाईंलाई सबैभन्दा सामान्य जटिलताहरू स्थापना गर्न अनुमति दिन्छ, जस्तै प्लेसेन्टिप र उक्त युवयिकल कर्डको आरोपी।
गर्भवती महिलाको धेरै प्रश्नहरू छन्, जसको उत्तरहरू छन् जुन उनीहरू हाम्रो लागि पर्खिरहेका छन्, हामी उनीहरूसँग प्राय: बुझौं।
- उदाहरणका लागि, अवश्य पनि, अल्ट्रासाउन्डको अवधि कसरी हिसाब गर्ने भनेर जान्न चाहन्छन्। के यो शिक्षाको साथ डेलिभरीको दिन सामान्यतया यो अध्ययन, उनीहरूको सहि वा कम्तिमा अनुमानित मिति निर्धारण गर्न सकिन्छ?
- यो विश्वास गरिन्छ कि अनुमानित मिति ist0 हप्ताको अवधिको साथ संयोगले मिल्दोजुल्दो छ (फेटस आकारको अल्ट्रासाउन्ड परिभाषा) डेलिभरी, र यदि गर्भावस्था कुनै प्रकारको बिना नै अगाडि बढ्छ भने, त्यसोभए बच्चा सटीकता प्लस माइनस 2- 2-3 दिनको साथ जन्मन्छ।
- अर्को सामान्य प्रश्न भनेको बच्चा जन्माउनु अघि अल्ट्रासाउन्डुन्ड गर्न अर्को सामान्य प्रश्न हो, ताकि महिला आफैंमा सबै जानकारीहरू प्राप्त गर्न सफल भए।
- बच्चा जन्माउनु भन्दा पहिले अल्ट्रासाउन्ड दुई केसमा गरिन्छ - त्यहाँ यसको लागि संकेतहरू छन्, वा हामी बिरामीको अनुरोधमा, त्यसैले सबै हामी जान्न चाहन्छौं। तर यो पूर्ण रूपमा यसलाई 38 38--39 हप्ताको अवधिमा समाहित गर्न आवश्यक छ।
- थप रूपमा, बिरामीहरूले बच्चाको जन्म हुनुभन्दा अघि, मातृत्व अस्पतालमा एक अल्ट्रासर बनाउन प्रायः सोच्दछन्।
यसैले यसलाई गर्भवती महिलाको आधुनिक परीक्षाको एक महत्वपूर्ण तत्व भनेको एक महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण तत्व हो भनेर भन्न सकिन्छ कि यसले बच्चा जन्माउने खतरा कम गर्न सम्भव बनाउँदछ जसले बच्चा जन्माउने जोखिम कम गर्न सम्भव बनाउँदछ। अवश्य पनि, यसलाई हरेक हप्ता पास गर्न - यो अनावश्यक छ, तर तिनीहरूलाई बेवास्ता पनि स्वस्थ र खुशीको बच्चाको उपस्थितिमा कुञ्जी छ!
कसरी गर्भवती महिलाको सहयोगी-1 19 1 लाई प्रसव वेदना प्राप्त गर्ने, नवीकरणको लागि के गर्दैछ, नवजातले नवजातलाई के गर्दैछन, "भोरोन Voronezh क्षेत्र ओलिगासमफोफेमोफेल र ओब्लेक्टर लाइममिलाभको मुख्य नियोनोताविद्सँगै स्त्री रोग विशेषज्ञ।
अब कति गर्भवती महिलाहरू अब छन् -
भोरोमोन क्षेत्रमा दैनिक 10-11 को नयाँ लॉलको रोगहरू देखा पर्दछन्। नोभेम्बर In मा 128 "कास्टिज-केस स्टील" एक्स्टिएन्ट एक्स्टेन थिए। यी मध्ये, एक पुरानो उपचार मा - 102, अस्पतालमा उपचार गरिएको छ। 1 advandications समुदाय अस्पताल निमोनिया प्रयोग गरिएको छ।
गर्भवती महिलामा कोरोनभिरस कसरी पत्ता लगाउने?
यदि गर्भवती महिलाले अर्भिका लक्षणहरू पत्ता लगाए भने pcr चिकित्सा सहयोगको उपचारको दिनमा सीधा सवारको निवारण भएको छ। मोबिइड आउटपेटिन्टको प्रकाश रूपहरू। यदि उच्च तापमान तीन दिनको लागि सुरक्षित गरिएको छ भने गवाहीको अनुसार बिरामीलाई अस्पतालमा प्रस्ताव गरिएको छ, छाती कम्प्यूटर उद्योग बनाउनुहोस्।
- सबै गर्भवती महिलाहरू प्रतिमाडफिसिफिसिफिसिफिसिअफिफिशियन्सी अवस्थामा छन्, हामी उनीहरूलाई राम्ररी परिचित सुरक्षा उपायहरू अवलोकन गर्न चाहन्छौं, मानिसहरुको नरसंहार नगर्नुहोस्। र यदि तिनीहरू अझै टेकिसोबोलिक छन् भने, आत्म-औषधिमा संलग्न नहुनुहोस्, गर्भवती महिलाहरूले परीक्षण गरिएका धेरै औषधीहरू कथित छन्, - ओल्गा सामफोएफोभ नोट गरिएको छ।
डेलिभरी हुनु अघि चाँडै, people हप्ताको अवधिमा, सबै गर्भवती योजनाहरू Covide-19 1 19 मा जाँच गरिन्छ। ESSO एकै समयमा भाइरसको लुकेका मिडियाहरू पत्ता लगाइन्छ, किनकि धेरै गर्भवती महिलाहरू एसिप्रेटिकको साथ अगाडि बढ्छन्।
- यदि कुनै कारणले गर्दा महिलाले pcr परीक्षण पास गरेन भने, यो अस्पतालमा प्रवेश प्राप्त भयो। मदिरानिटमा, ओर्वी स्लीपको स्प्रिंग्स तत्काल, सही प्राप्त विभागमा सही छ। यदि त्यहाँ कुनै रोग छैन भने, भौतिक बारट पहिलो दिनमा गरिन्छ। आगामी परिणामहरू एक इन्सुलेटकर्तामा राखिन्छ। तर विश्लेषण परिणामहरूको हातमा जारी राख्नु उत्तम हो: बच्चाको हितको लागि यो आवश्यक छ, ताकि यो अपरिहार्य छ कि यो संक्रमणको जोखिमको अधीनमा छ, "ओलिगा सज्जोलोले भनेका छन्।
- जिल्ला चिकित्सकले महिला सल्लाहमा संक्रमित गर्भवती सूचना सार्छ। र महिला परामर्श एक उल्टो दृष्टिकोणबाट अवलोकन गर्दैछ। "PISIID-SOXPER 'को राज्यमा गर्भवती महिलाले हामीलाई गम्भीर अवस्थाबाट बच्न दिन्छ। यद्यपि बिरामीको सास फेर्न कठिनाइहरूको साथ कठिनाइहरूको कारणले समयपूर्व भरोसाको सहारा लिन काम गरे। परिणाम समृद्ध छ, आमा र बच्चाहरू जीवित छन्।
के मोविइडले भ्रुणको विकासलाई असर गर्दछ?
यदि तपाईंको गर्भावस्थालाई गर्भावस्थाको 39 brobelbot ओडस्टेटिक हप्ताको मार्कमा पुगेको छ भने, यसको मतलब बच्चाले तीस हप्ता अघि कल्पना गरेको छ (months महिना र 1 हप्ता।)।
फलहरू र यसको विकासमा हप्तामा
किनकि बच्चा 38 38 हप्ताको अवधिमा चन्दा मानिन्छ, यस हप्ता अन्तिम दिन कुनै आश्चर्यको कुरा होइन। सबै प्रणालीहरू र बच्चा अ organs ्गहरू पहिले नै पाक्छन्, यो पूर्ण रूपमा व्यवहारिक हुन्छ। एक नियमको रूपमा, यस शब्दले, प्रत्येक आमालाई कपडाले भेट्दै हुनुहुन्छ, जसले पूरै नौ महिना सहन गरेको छ।
फलहरू पहिले नै गठन भैरहेको छ र बिस्तारै बढ्न जारी छ। थप विकास र जीविकाको लागि पौष्टिकताहरू यो अझै पनि नाभीत्मक डोरी र प्लेसामा हुँदै जान्छ। उसको फोक्सो पहिलो सासका लागि तयार छन्, जुन जन्म पछि तुरुन्तै उत्पादन गरिनेछ। आन्द्रामा, त्यहाँ पहिले नै पोषक तत्वहरूको लागि आवश्यक छ, र पेटले खानाको विभाजनका लागि एन्जाइम उत्पादन गर्दछ।
<< p> र बिभिन्न रिफ्रेक्सहरू विकास गरिएका छन्, विशेष गरी चुस्दै, जुन बच्चाले जन्म पछि तुरुन्तै प्रदर्शन गर्दछ। केन्द्रीय स्नायु प्रणाली असमान रूपमा विकसित छ। जबकि केवल संशोधित विश्लेषकहरू, फसल कपडा, मेरुदण्डको कपडा र अनुहारको स्नायुको अंश, चरम आन्दोलनहरू उत्पादन गर्न मद्दत गर्दछ। अन्य CNS कम्पोनेन्टहरू बच्चा जन्माए पछि गठन गर्नेछन्।
तपाईंको बच्चाले 20--0 सेन्टीमको दूरीमा आफ्नो दृश्यलाई ध्यान केन्द्रित गर्न सक्षम छ। यो उसको टाउकोलाई खुवाउने समयमा आमाको अनुहारमा अवस्थित छ। Crumbs को मस्तिष्क मस्तिष्क पहिले नै भोलिपरक वस्तुहरू, र color ्ग छविहरू र विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरू छुट्याउन सक्षम छ, र colors को चमत्कारिता विकसित हुन्छ।
तपाईंको बच्चा नवजातदेखि फरक छैन। हे, हे, हे, हे, हेउरो 4--5 सेन्टीमिटर बढ्न सक्छ, र एक विशिष्ट बन्दूक उनको वृषफाटा पहिले नै हराइसकेको छ। शरीर र प्राथमिक लुब्रिटीनमा होईन, यसको मामूली मात्रा केवल गहिरो फोल्डमा रहन सक्दछ। तिनीहरूले एक मरीघक समाते, तिनीहरू औंलाहरू भन्दा पर जान सक्छन्। बच्चा छाला, यसको बाहिरी लेयर जुन यस हप्ताको अपडेट हुनुपर्दछ, एक सुन्दर फिक्का गुलाबी रंग छ, जसले बनाएको subcute विविध फ्याट लेयरलाई जनाउँदछ।
39 को अवधिको लागि, भविष्यका आमाहरू आफ्ना बच्चाहरूको मोटर गतिविधिमा कमी देख्छन्। यद्यपि यो चिन्ता लायक छैन। उनको आमाको पेटमा, त्यहाँ कुइज र अन्य आन्दोलनको आयोगको लागि त्यहाँ पहिले नै थोरै ठाउँ छ। भ्रुणको शरीरले गर्भाशयको सबै ठाउँ लिन्छ। अर्को कारणले गोला बारुद पानीको संख्या कम गर्नु हो। थप रूपमा, बच्चालाई आगामी श्रम प्रक्रियामा भाग लिन शक्तिहरू आवश्यक पर्दछ। यसैले गर्भवती महिलाले कम खोल महसुस गर्छिन्।
मा, यसले युकेमा त्यो प्रदर्शन गर्यो कि बेलायतमा कुनै पनि अन्य आर्थिक तवरमा विकसित देश भन्दा बढी छ। उनलाई पढिसकेपछि, शाब्दिक कलेजका कर्मचारीहरूले ब्रिटेनको उमेर 400 बर्ष भन्दा माथिको जन्म जन्मेको साथ औंल्याए र यस उमेरका गर्भवती महिलाहरू युवा महिला भन्दा खराब महसुस गरे। उनीहरूको लागि बच्चा हराउने जोखिम कम गर्न, यो प्रस्ताव गरिएको थियो।
<< p> अध्ययनका लेखकहरूले यो महिलालाई गर्भवतीको शारीरिक मार्गमा 39 th औं हप्तामा 39 onth औं हप्तामा एक औषधी उत्तेजना गर्न विश्वस्त तुल्याए भने, जन्म भयो Stult1 औं हप्ता), युकेमा मात्र, तपाईं प्रति वर्ष मृत्युबाट कम्तिमा 1 17 नवजात Nevans ननबोर्डहरू बचाउन सक्नुहुन्छ।
यस्तै रणनीतिको अर्को प्लस भनेको विस्तृत अपरेशनहरूको संख्या बढाउन अभाव हो, सिथियर सेक्सन।
बाट सहयोगी प्रोफेसर, र शिक्षक एन्ना केन्यान आफ्नो अध्ययनको समयमा आमाको उमेरको स्वास्थ्यमा भग्नावशेष र आमा आफैंमा समर्पित धेरै कामहरू विश्लेषण गरे। डेटाले देखायो कि जमानको 400 औं हप्तामा गर्भावस्थामा, जलविधनको जन्म जोखिम 35 35 बर्षसम्म महिलासँग तुलना गरिएको छ।
र जितेका महिला समूहका लागि 39 th औं हप्तामा गर्भावस्थाको st1 औं दिनमा महिलामा समान हुन्छ।
गर्भावस्थाको सर्पदारहरू गर्भावस्था हप्ता
जब त्यहाँ hents 99 औं गर्भावस्था छ, भविष्यको मिल्स असुविधाको परिवर्तनहरू जुन कुनै पनि कुराबाट बोल्दछन्, र बच्चासँगको बच्चा। संयुक्त राज्य अमेरिका रोग विशेषज्ञ को लागी चिह्नहरु को अस्तित्व, र महिला आफैंले न्याय गर्न सक्दछ कि हाइलाइटहरु टाढा छैन। जसले पूर्वानुमान गरिन्छ:
याद गर्नुहोस् कि अन्तिम दुई पूर्वानुमानहरू भन्छन् कि भविष्यमा आमाले अस्पताल जानु आवश्यक छ - जन्म बढेको छ।
बाँकी गुणहरू एक बच्चाको उपस्थितिको रूपमा धेरै चोटि माथि उठ्न सक्छ, त्यसैले मातृत्व अस्पतालमा हतार गर्नु आवश्यक पर्दैन।
बच्चा जन्माउने वर्षामा हप्तामा
0 साप्ताहिक ड्रोन बच्चाको इष्टतम पुनरावेदन हो। शव पनि प्रक्रियाको ईन्जिनहरूको लागि पनि तयार छ। फस्टिंगका सबै आन्तरिक अंगहरूले स्वतन्त्र कार्य गर्न सक्षम हुनेछन्। शिशुलाई उनले गर्भधारणमा खसालिन्, धेरै कम सार्दै, र उपयुक्त को लागी कुर्छिन्। उही समयमा, शरीर समुद्री यात्रा प्यारारिचरी कार्य हो, हर्मोनहरू उत्पादन गर्दछ।
बच्चा जन्म 1 year 99 हप्तामा 39 year को हप्तामा हरेक महिलाले हरेक महिलालाई बिभिन्न तरीकाले सुरु गर्छिन्। नियमको रूपमा, गर्भाशयमा दुखहरू प्रकट गर्दै, जुन बलियो हुन थाल्छ।
यदि अन्तराल --7 मिनेटमा कम गरिएको छ भने यसको मतलब जेनेरा सुरु भयो। यससँग समानान्तरमा, हिप गर्ने मार्गहरू शून्य पाइपलाइन द्वारा भिन्न हुन सक्दछ र तेल पानी टाढा सार्नुहोस्।
माम्सले एम्बुलेन्सको प्रजा कार्यालयमा जम्मा गर्न तुरुन्तै बनेको छ। खैर, यदि पिटल नजिक छ, तिनीहरूका आफन्तहरूबाट कोही। मौखिक समर्थन र व्यक्तिको उपस्थिति दिइयोमा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
फलहरू गर्भावस्थामा हप्तामा
गर्भावस्थाको 39 year हप्ता - बच्चालाई प्रकाशमा देखा पर्न सही समय। यस समयमा, बच्चा जन्म कुनै पनि समयमा सुरू गर्न सकिन्छ। गर्भवती महिलाहरूले मातृत्व अस्पतालमा जानको लागि आफ्नै कल्याणको ख्याल राख्नु पर्छ।
हप्ता - गर्भावस्थाको कति महिना?
लाई पत्ता लगाउनको लागि, 39 weeks हप्ता - कति महिना गर्भावस्था, भावी आमाहरूलाई डाक्टरलाई सम्बोधन गरिएको छ। वास्तवमा, यी गणनामा जटिल केहि छैन। यद्यपि, गणनाहरू सही रूपमा पूरा गर्न, तपाईंले केहि खोल जान्नु आवश्यक छ र तिनीहरूलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ। पहिलो - ओबस्टेन्ट्रिक महिनामा weeks हप्ता हुन्छ। एकै साथ हालको पात्रो महिनामा कति दिन फरक पर्दैन।
यस्तो तरीकाले माथीका हप्ताहरूमा अनुवाद गर्न को लागी, तपाइँले तिनीहरूको नम्बरलाई perfore onglive before बृद्धि भएको छ, गर्भावस्था अनुसार 10 जना मिडविच वा weeks हप्ता र weeks हप्तासम्म। जब अस्पष्ट अवधि गणना गर्दै, गणनाहरू अन्तिम मासिक धर्मको मितिबाट सुरू हुन्छ, त्यसैले भ्रुण अवधि छोटो हुन्छ।
यस्तो तरीकाले माथीका हप्ताहरूमा अनुवाद गर्न को लागी, तपाइँले तिनीहरूको नम्बरलाई perfore onglive before बृद्धि भएको छ, गर्भावस्था अनुसार 10 जना मिडविस्ट वा weeks हप्ता र weeks हप्तासम्म। जब अस्पष्ट अवधि गणना गर्दै, गणनाहरू अन्तिम मासिक धर्मको मितिबाट सुरू हुन्छ, त्यसैले भ्रुण अवधि छोटो हुन्छ।
गर्भावस्था हप्ता - बच्चालाई के हुन्छ?
<< p> पछि मितिहरूको शरीरमा परिवर्तनहरू केहि छन्। यदि हामी यस अवधिको बारेमा कुरा गर्छौं भने गर्भावस्थाको year9ung हप्ताको रूपमा, जुन फलस्वरूप भइरहेको छ, तब स्नायु प्रणालीको सुधारको उल्लेख गर्नु आवश्यक छ, जन्मजात रिक्क्सको विकास। बच्चालाई पहिले नै थाहा छ कि सिनीलाई कसरी समात्ने, लगातार एक औंला बेकार छ र निल्नु कसरी महत्त्वपूर्ण छ भनेर थाहा छ, जुन पाचन प्रक्रियाको लागि महत्त्वपूर्ण छ।
Pancreas पहिले नै पूर्ण गठन र कार्यहरु को लागी। यसले एन्जाइमहरूलाई संयोजित गर्दछ जसले निल्नको आंशिक पानालाई निल्न मद्दत गर्दछ। आन्तरिक आन्द्राको वातावरण बाँझो र उपयोगी सूक्ष्मजीवहरूको साथ मात्र स्तनपान प्रक्रियाको सुरूवातको साथ मात्र उपयोगी सूक्ष्मजीवहरू रहन्छ।
गर्भावस्थाको तीस-नवौं हप्ता: प्रत्याशा
गर्भावस्थाको तीस-नवौं हप्तामा मतलब भनेको बचपन चाँडै सुरु हुनेछ। एक महिला यसको लागि शारीरिक र मनोवैज्ञानिक दुबैको लागि तयार छ। यस समयमा, क्रुच पूर्ण रूपमा विकसित भएको थियो र उपस्थितिको लागि तत्पर रहेको छ। गर्भावस्थाको year-nuntunsnestends गढीको दिनमा कस्तो संभावनाहरू यसको भावनात्मक राज्यले सामना गरिरहेका हुन सक्छ। यो परिवर्तनशील छ: डरलाग्दा हो डरलालादेखि नै शतकदेखि लामो प्रतीक्षा गरिएको आपतकालीन बैठकको लागि पर्खनु अघि आफ्नो बच्चाको साथ। यस मार्फत धेरै महिलाहरू। यसको बारेमा चिन्ता नगर।
<< P> यस हप्ता, भविष्यका आमाहरू पनि उदयको चाखलाग्दो संकेतहरू देखा पर्दछन्। एउटी महिला घरमा एक सि walke ्ग्रै कुना पत्ता लगाउन कोशिस गर्दैछिन् र अरुबाट आफूलाई बाहिर निकाल्न कोशिस गर्दैछिन्।
अरूले गर्भवतीहरूका लागि नयाँ चाहनाहरू हाँस्नु वा रोक्न आवश्यक छैन। यो व्यवहार जन्मजात अवधि को विशेषता हो। प्रकृतिले एक सुरक्षित ठाउँ फेला पार्ने इच्छा राख्यो।
यो पुरानो समयमा एकदम सान्दर्भिक थियो, जब कुनै चिकित्सा उपचार थिएन र घरमा जन्म्नुपर्यो। अब यो एक अवचेतन स्तरमा काम गर्दछ।
गर्भावस्थाको yearth-नवौं दिनमा, भविष्यको आमाले भव्यताका प्राप्ति गर्दैछ। अब उनले गर्भावस्था र बच्चाको आन्दोलनको संकेतहरू मात्र सुन्नु आवश्यक छ, तर झगडाको आशंकामा पनि अन्य संवेदनामा पनि सुन्नुपर्छ। बच्चा तल झर्दै। यसको कारण, एक महिलाको कल्याण अलि सजिलो हुन्छ, यद्यपि यस हप्ताको यति रमाइलो सुविधाहरू छैनन्:
<< p> बाल मान्दै बच्चा प्रेस, त्यसैले भविष्यको आमाले महिला कोठामा बढ्दो रूपमा तान्दैरहेको छ। यस हप्ता, पेटमा एक सानो घट्ना मा एक सानो घट्ने कारण महिलाले भूषण बढान्छ, तर कुर्सीको साथ समस्याहरू देखा पर्न सक्छ।
यदि बच्चा यस अवधिमा संसारमा देखा पर्ने निर्णय, महिलाको भूख कम कम हुनेछ। Part phanght गर्भावस्था हप्ताका लागि गर्भवतीहरूले गर्भाशयको बारम्बार कटौतीमा पर्नेछन्।
हुनसक्छ उनीहरू ड्रइज ड्रर्टको अप्रिय अनुभूतिको पछाडि छोड्नेछन्। प्रशिक्षण र वास्तविक संकुचन भ्रमित गर्न यो महत्त्वपूर्ण छ।
नियमको रूपमा, वास्तविक लगभग उही समय र उनीहरूको बीचमा अन्तराल बिस्तारै घट्दै जान्छ। झगडा बारम्बार हुन्छ, गम्भीर पीडाको भावनाको साथ।
गर्भावस्थाको तीस-नवौं हप्ता गर्भावस्थाको अन्तिम चरण बन्न सक्छ। यस समयसँगको लागि भ्रुणस मास र वृद्धिमा बढेको छ। अब बच्चाको वजन लगभग kg किलोग्राम तौल हुन्छ, र यसको बृद्धि 522 सेन्टीमिटरसम्म पुग्न सक्छ। अन्य बच्चा बडी प्यारामिटरहरू परिवर्तन हुँदैछन्:
भविष्यको आमाले चाँडै उसको बच्चालाई भेट्नेछ र उहाँ यी months महिनामा कसरी हुर्कनुभयो भनेर पत्ता लगाउँदछ। चिकित्सकहरूको अनुरूप फलहरूले राम्रो कुरा जान्दछन् कि यो महत्त्वपूर्ण छ। यदि बच्चा धेरै सानो छ भने यसको मतलब गर्मिनुको समयमा केहि गलत भयो।
गर्भावस्थाको yeass0 नथल हप्तामा भ्रुणको विकास लगभग सम्पन्न भयो। बच्चाले आफ्नो सम्पत्तीहरूको आक्रमणको लागि के हुँदैछ भनेर सुन्छ। उसले आफ्नो आमाको आमाको आवाजलाई भिन्न पार्छ, तीखो आवाजहरू तर्फबाट कडा प्रतिक्रिया गर्दछ, श्रृंगारको व्यवहार गर्न सक्दछ। तसर्थ, गर्भवतीको ढिला अवधिमा, हल्ला गर्ने ठाउँहरू भाग लिनु हुँदैन। अडिटरी विकासको अतिरिक्त, शिशुले आँखाको गठन पूरा गर्यो। काम:
गर्भावस्थाको नवौं महिनाको अन्त्यबाट उपयुक्त। अलि बढी - र तेस्रो त्रैमासिक पूर्ण रूपमा थकित।
तपाईको क्रम्ब्सहरू कुनै खाली ठाउँ बाँकी छैन: बच्चाले आफ्नो चिनहरू घुँडा टेक्नु र जब प्रकृतिले "आउटलेट" गर्न रोक्दछ। यो सम्भव छैन कि अब तपाईं अमूर्तको बारेमा सोच्नुहुन्छ।
सम्भवतः तपाईको विचारमा केवल एउटा चीजमा: ले जन्म दिनु पर्छ। र यो एकदम सामान्य छ, किनकि तपाईं थकित हुनुहुन्छ।